Mpianatra iraisam-pirenena mahomby amin'ny diplaoma avy amin'ny Hodges U
Mpianatra Iraisam-pirenena Mahita ny lafiny mifaninana amin'ny oniversite Hodges!
Mipetraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ve ianao izao ary mieritreritra ny hahazo ny fianaranao any Etazonia? Nahita ny tranonao tao amin'ny Oniversiten'i Hodges ianao!
Izahay dia mifantoka amin'ny famolavolana làlana namboarina ho an'ny mpianatra miasa ary nanamora ny fizotran'ny fidiranay mba hahamora ho an'ireo mpangataka anay iraisam-pirenena ny mahita ny fahombiazan'izy ireo ao amin'ny Hodges U. Plus, tanjonay ny hanangana vondrom-piarahamonina maro karazana ary handray ireo mpianatra amin'ny fiaviana rehetra. na inona na inona volon-koditra, loko, finoana, fivavahana, lahy sy vavy, fironana ara-pananahana, fiaviana nasionaly, na fahaizana / kilema.
Mahereza. Atombohy amin'ny Hodges University anio.
Fandaharam-pampianarana misy aingam-panahy avy amin'ny mpiasa
Nomena anarana hoeCollege tsara indrindra 40 any Florida"
Oniversite tsy mitady tombom-barotra
Nomena anarana hoe Campus faha-3 azo antoka indrindra any Florida
Southwest Florida dia paradisa oasis tropikaly ho an'ny olona avy amin'ny fari-piainana rehetra
Raiso fianarana akaiky palm-be, masoandro, ary morontsiraka fasika fotsy
Kilasy iray isam-bolana endrika mifantoka be loatra mihaona Fisoratana anarana amin'ny fotoana feno fepetra takiana
Fandaharam-pianarana ho an'ny mpianatra sy ny fifanakalozana (SEVP) voamarina am-pianarana
We ataovy mora hahafahanao mahazo ireo antontan-taratasy ilaina hanaovana anao Fampianarana amerikana azo atao
Fanamarinana voarakitra ao anatin'ny Fandaharam-pianarana
30 taona an'ny Manompo amin'ny fampianarana ambony mpianatra
Kilasy natolotra Online, On-Campus, dia mitambatra, na TEC endrika. Ny kilasy TEC dia mamela anao hanana fahalalahana haka kilasy mivantana na aiza na aiza.
Mikaroha ny fandaharanay
Fampahalalana iraisam-pirenena ho an'ny mpianatra
Fandoavam-bola ho an'ny mpianatra mianatra: $ 20
Fandoavana fangatahana diplaoma: $ 50
Miangavy anao hiara-miasa amin'ny solontenan'ny mpampiditra anao mba hametraka ny fomba tsotra indrindra hanomezana ny saram-pitsarana.
Hodges University dia mihazakazaka rafitra fidiram-bola isam-bolana ho an'ireo mety ho mpianatra izay mifanaraka amin'ny daty fanombohan'ny fampianarana isam-bolana. Mila manombatombana ianao rehefa te hanomboka ny fianaranao ao Hodges ary mikasa ny hanomboka ny fizotran'ny fampiharana iraisam-pirenena farafaharatsiny 90 andro (3 volana) mialoha. Io dia hahafahantsika mameno ny fanodinana ny fampiharana anao, ny firaketana fanampiny ary ny visa.
Fampahalalana fanampiny ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena
Raha mila fanazavana momba ny trosa, vatsim-pianarana ary fanampiana ara-bola, fiantohana ara-pahasalamana ary fitaterana, jereo azafady Handinika ny mpianatra.
Fandraisana ny mpianatra iraisam-pirenena
Fandraisana iraisam-pirenena ao Hodges U
Mora ny manatrika an'i Hodges U! Nanamora ny fizotry ny fidirana ho an'ireo mpianatra iraisam-pirenena izahay, ka manamora kokoa ny fanatrehana ny oniversite any Etazonia. Manolotra programa diplaoma an-tserasera koa izahay ka na dia te hijanona eo akaikin'ny tranonao aza ianao dia mbola afaka manatrika ny Hodges U ary mandeha lavitra amin'ny asanao amin'ny fiainanao.
Nahazo alàlana araka ny lalàna federaly i Hodges University hisoratra anarana amin'ireo mpianatra tsy mpifindra monina. Ary faly izahay fa mandinika an'i Hodges ianao! Ny mpianatra iraisam-pirenena mety dia voasokajy ho toy izany raha tsy olom-pirenena amerikana, olom-pirenena roa, na mponina maharitra, ary mangataka an Visa ho an'ny mpianatra F-1 na visa J-1 Exchange Visitor (visa mpitsidika fifanakalozana dia azo ampiasaina ho an'ny mpianatra na ho an'ny manam-pahaizana). Azafady mba zahao amin'ny fidirana momba ny fandaharam-pianarana azonao atao amin'ny fianarana iraisam-pirenena fa tsy ny programa rehetra dia omen'ny Departemantan'ny fiarovana ny tanindrazana amerikana, Programme ho an'ny mpitsidika fifanakalozana mpianatra, na Departemantam-panjakana amerikana hisoratra anarana amin'ny mpianatra iraisam-pirenena.
Misy dingana maromaro takiana aminao mba hahafenoanao fepetra hahazoana manatrika ny Oniversite Hodges ary vonona izahay ary afaka manampy anao hanomboka.
Dingana amin'ny fidirana iraisam-pirenena
Fenoy ny fampiharana amin'ny fidirana ary alefaso ny sarany fangatahana tsy azo averina.
Transcripts, tombana amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny masoivoho fanombanana nekena, ny asa rehetra tsy noraisina tamin'ny alàlan'ny andrim-panjakana amerikana nahazo fankatoavana. FITSIDIHANA naces.org ho an'ny lisitr'ireo masoivoho ankatoavina.
Porofon'ny fanohanana ara-bola mampiseho porofon'ny famatsiam-bola, ampy handoavana ny vidin'ny fanatrehana isan-taona sy ny fandaniana amin'ny ankapobeny. Ny vola ao amin'ny kaonty amin'ny kaonty amin'ny banky dia tokony hitovy amin'ny enim-bolana fanabeazana sy sarany. Afaka mampiasa kaonty banky dimy (5) farafahakeliny ianao. Azafady mba mifampiresaha amin'ny mpanolotsaina momba ny fidirana hiresaka momba ny toe-javatra misy anao sy ny fiantraikan'izy ireo amin'ity takiana ity.
Porofon'ny fahaizana Anglisy
Ny mpangataka iraisam-pirenena rehetra izay ny fitenin-drazany dia tsy tokony handefa porofon'ny fahaizany anglisy amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto:
TOEFL isa iBT farafaharatsiny 79, 213 mifototra amin'ny solosaina, na 550 voasoratra; OR
IELTS isa amin'ny valin'ny tarika ankapobeny 6.0 na avo kokoa; OR
SAT valin'ny famakiana sy fanoratana miorina amin'ny 550; OR
Vita soa aman-tsara ny programa IEP0002 anglisy mahery.
Ny fepetra takiana dia mety ho afa-po amin'ny fandefasana ny iray amin'ireto:
650-teny naoty naoty (ho an'ireo mpianatra nahavita telo taona nisesy farafahakeliny tao amin'ny andrim-panjakana iray izay ny teny anglisy no fiteny fampianarana); OR
Isa 4 na 5 amin'ny fanadinana ny College Board Advanced Placed Program (AP) amin'ny fiteny anglisy; OR
5 na avo kokoa amin'ny IB (International Baccalaureate) Fiteny avo lenta Fanadinana amin'ny teny anglisy; OR
Naoty 32 prededed an'ny XNUMX na tsara kokoa; OR
Famitana ny lisea amin'ny toeram-pianarana miteny anglisy.
Ireo mpianatra avy amin'ny firenena tsy miteny anglisy tsy misy porofon'ny fahaizany miteny anglisy, na isa ambany noho ny farafahakeliny takiana, dia ekena amin'ny fepetra ary tsy maintsy manome fahafaham-po ny fepetra takiana amin'ny fahaizana anglisy alohan'ny hanombohany ny fandaharam-pianarana.
Mpampiasa miteny anglisy: Ny olom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra, ny Repoblikan'i Irlandy, Aostralia, Kanada, New Zealand, na firenena hafa izay ny teny anglisy no fiteny ofisialy ARY izay tsy mahafeno ny iray amin'ireo fepetra takiana etsy ambony ireo, dia tokony hifandray amin'ny Office of Admissions mba hamaritana ny fomba hahazoana ny fidirana. fepetra takiana.
Rehefa ekena, ny mpianatra iraisam-pirenena dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny fanatrehana ny fivoriana voalohany. Aorian'izany dia afaka mangataka ny mpianatra Form I-20 takiana mba hahazoana mpianatra VISA amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena onenan'ilay mpianatra.
Majani Lullein (filoha lefitra) - ESL, Paralegal
Vokatry ny asany teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny naha filoha lefitry ny Anchorage Productions Media, ary koa ny fanolorantenany hianatra sy hahomby ao Hodges, dia misolo tena ny oniversite ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Hispanika izy. Nandritra ny 10 taona dia nanohy nanompo tamin'ny naha-mpitondra teniny i Lullein, nizara ny tantaran'ny fahombiazany tamin'ny alàlan'ny fahitalavitra, gazety, gazety ary radio, nilaza hoe: “Mihaona amin'ireo olona mizara ny zavatra niainany Hodges manokana tamiko aho. Ny maro amin'izy ireo dia mpifindra monina, olona manana fanantenana sy nofinofy lehibe, ary nilaza tamiko izy ireo fa ny tantarako mba handresena ireo sakana amin'ny fiteny sy ny kolontsaina dia nanentana azy ireo hianatra bebe kokoa, hiasa mafy kokoa ary hianatra. ”